CAFFEE - (Onkoloolessa 25 Bara 2012) : Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa manneen hojii isaaf itti waamaman 8 dhaggeeffatee kallattii itti aanu kaa’ee jira.
Koreen kun, gamaaggama taasiseen gama barnootaatiin, hojiin baruufi barsiisuu Afaan Oromootiin Naannolee biroofi Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu kan qabu ta’uu ibsuun hordoffiifi to’annoon dhaabbilee barnoota dhuunfaa irratti taasifamaa jiru garuu xiyyeeffannaa olaanaa barbaada jedheera.
Gama biraatiin, fayyaan walqabatee dhiyeessiifi to’annoo Ambulaansii, meeshaalee wal’aansa hospitaalota haaraa ijaaramaniif guutuun hojii jalqabsiisuun walqabatee hojiin hojjetame akka ciminaatti kan ilaalame yommuu ta’u, haadholiin tajaajila dahumsaa mana yaalaatti argachuu qaban, ammallee gadaanaa ta’uu ibsuun hanqina jedhee dhimmoota adda baase keessaa isa tokkodha.
Kana malees, ayyaanni Irreechaa Finfinneefi Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti haala gaariifi nagaan kabajamuufi barnoonni raadiyoo karaa saatalaayitii OBNn darbuu jalqabuun jalqabbii gaarii ta’uu eeree jira.
Xumuura irrattis, manneen hojii dhimmi ilaalu, dhaabbilee dhuunfaa barnootaa, fayyaafi warshaalee adda addaa waliin walqunnamtii cimaa taasisuun, du’aatii haadholeefi daa’immanii xiqqeessuuf xiyyeeffannaan hojjechuufi piroojeektiiwwan buleeyyii xumuursisuun hojiitti galchuu akka qaban ibsuun kallattii hojii isaanii itti aanu keessatti xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban akeekanii jiru.
Toorbee kana 4232
Ji'a kana 12208
2008 irraa eggalee 3783188